Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Nahazo volamena sy volafotsy i Jamaika tamin'ny Loka Travvy
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
(lr) Delano Seiveright, Mpanolotsaina zokiolona sy stratejika, Mpitantana ny Birao Mpizahatany ao amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy Jamaika - Christopher Wright, Mpitantana ny Fampandrosoana ny Orinasa; Francine Carter Henry, Mpitantana, Opérateurs Tour ary Airlines; ary Phillip Rose, Talen'ny Faritra, Avaratra-Atsinanan'i Etazonia, dia maka sary fohy hanehoana ny loka volamena sy volafotsy an'i Jamaika azo tamin'ny 2021 Travvy Awards natao tao amin'ny Miami Beach Convention Center ny alakamisy 11 Novambra.
Tsy ampy iray volana taorian'ny nandrombahany ny World Travel Awards Caribbean & North America 2021 Winners Day tany Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, Jamaika dia nahazo naoty be indray ny alakamisy 11 Novambra, tamin'ny Loka Travvy 2021 tany Miami, Florida.
Ny firenena dia naka ny volamena ho an'ny Toeram-pizahan-tany tsara indrindra any Karaiba, Toeram-pisakafoanana tsara indrindra, Birao fizahan-tany tsara indrindra, ary Programa Akademia momba ny fitsangantsanganana tsara indrindra.
Nahazo mari-pankasitrahana volafotsy ihany koa i Jamaika ho an'ny Toeram-panambadiana Karaiba tsara indrindra sy Toerana Volan-tantely Karaiba tsara indrindra.
Ny loka Travvy isan-taona dia natao tao amin'ny Miami Beach Convention Center.
Jamaika nahazo volamena tamin'ny sokajy Toerana tsara indrindra any Karaiba, Toeram-pisakafoanana tsara indrindra, Birao fizahan-tany tsara indrindra, ary Fandaharana Akademia momba ny Travel Agent tsara indrindra. Nahazo mari-pankasitrahana volafotsy ihany koa i Jamaika ho an'ny Toeram-panambadiana Karaiba tsara indrindra sy Toerana Volan-tantely Karaiba tsara indrindra.
Minisitry ny fizahantany Hon. Edmund Bartlett dia naneho ny fankasitrahany tamin'ny faneken'i Travvy ny toerana haleha, ary nizara fa "voninahitra lehibe ny eken'ity vondrona matihanina matihanina ity."
“Amin'ny fankasitrahana sy fanetren-tena amin-kitsimpo no andraisan'i Jamaika ireo loka ireo. Tsy maintsy misaotra ny ekipa miasa mafy ao anatin'ny Minisitry ny fizahan-tany, ny Jamaica Tourist Board, ireo sampan-draharaham-panjakana hafa eto amintsika, ary ireo mpiara-miombon'antoka amintsika izay niasa tsy an-kijanona mba hampiroboroboana ny marika Jamaika sy hanatsara hatrany ny tolotra fizahan-tany. Tena mahafinaritra tokoa ny ekena mandritra ny areti-mifindra, izay nisy fiantraikany lehibe tamin'ny indostrian'ny fizahantany, ”hoy izy.
Tamin'ny lanonana mari-pankasitrahana, Filoha, ny Jamaika Tourist Board (JTB), John Lynch; Delano Seiveright, Mpanolotsaina ambony sy stratejika, Minisiteran'ny Fizahantany, ary ireo mpanatanteraka avy amin'ny JTB - Christopher Wright, Mpitantana ny Fampandrosoana ny orinasa; Francine Carter Henry, Mpitantana, Opérateurs Tour ary Airlines; ary Phillip Rose, Talem-paritra, Etazonia Avaratra-Atsinanana, nisolo tena an'i Jamaika.
Tamin'ny taon-dasa, ny mpamaky mpitety faritany [email voaaro] magazine sy TravelPulse.com dia nandatsa-bato maherin'ny 130,000 tamin'ny sokajy 140 mahery mba hamaritana ireo mpandresy amin'ity taona ity.
Ny Loka Travvy isan-taona nomena anarana hoe "Academy Awards of the Travel Industry" dia natao tao amin'ny Miami Beach Convention Center mba hanomezam-boninahitra ireo orinasa fitsangatsanganana, vokatra fitsangatsanganana, masoivoho fitsangatsanganana, ary toerana ho an'ny fahombiazany.